Sidee Ayaa Liverpool Lagu Siin Karayaa Saddexda Dhibcood Ee Kulankii – Axadle
Kaddib markii ay baaqatay ciyaartii Manchester United iyo Liverpool ee Axaddii oo ay joojiyeen taageereyaasha Crimson Devils oo u cadhaysan mulkiileyaasha kooxooda, waxay dhiggooda Liverpool fiirsanayaan buugaagta sharciga, iyagoo ka baadhaya sida kooxdoodu ay ku heli karto siddexdii dhibcood ee ciyaartaas.
Ciyaarta oo markii hore dib lavatory dhigay muddo saacad ah iyadoo rajo laga qabay in boolisku ku guuleysan doono in ay kala kexeeyaan taageereyaasha, ayaa kusoo dhamaatay rajo la’aan kaddib markii ay mudaharaadeyaashu iska caabbiyeen, dagaalna kala hor tageen booliska.
Liverpool oo guul ay ka hesho kulankaasi uu muhiim ugu ahaa in ay kusii raad-joogto Chelsea iyo Leicester Metropolis oo dhibco badan ka horreeya, laakiin ay rajo ka qabto in ay gaadho si ay kaalinta afraad usoo geli karto, ayaa waxay dhimasho ka xigtaa in saddexda dhibcood ay weydo.
Arrinta kulankan ayaa lagu samayn doonaa baadhitaan, haddii ay caddaato in United ay tallaabooyinkii ku habboonaa ka qaadi weyday in taageereyaasha laga baajiyo in ay rabshadda sameeyaan, sidoo kalena lavatory nisbeeyo in ay qayb ka ahayd in ciyartaasi baaqato, qodobkan ayaa sheegaya in Liverpool la siin doono saddexda dhibcood ee kulankaas iyadoo aan la ciyaari doonin kulankan.
Laakiin arrinta Crimson Devils badbaadin karta ayaa ah in boolisku ay gaadheen go’aanka ah in ciyaarta la joojiyo, taas oo sida uu sharciga Premier League dhigayo ka dhignaan doona in Manchester United aan lagula xisaabtami doonin, sababteedana aan lavatory nisbayn doonin in kulankaasi uu baaqdo.
Wargeyska Liverpool Echo ee kasoo baxa magaalada Liverpool ayaa dhinacyo badan ka eegay arrintan, waxaana uu isbarbar-dhig ku sameeyey qodobbada sharci ee lavatory adeegsado kulamada baaqda ee qasku hadheeyo iyo sida koox lavatory siin karo saddexda dhibcood iyadoo aan ciyaarin.